Aina Nirina - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Anarana sy fanampiny : ANDRIANARIVELO Rahajanirina Hery na AINA Nirina no solon’anarana entiny amin’ny mahampanoratra azy
Teraka ny 03 jolay 1970 tany Toamasina.
Efa namoaka tononkalo an-jatony tao amin’ny pejy fesibokiny AINA NIRINA sy tao amin’ny vetso.serasera.org
Tany amin’ny Sekoly Ambonin’ny Politeknika Antananarivo (Vontovorona) no nianarany ka nahatafavoaka azy ho Injenieran’ny trano sy ny asa vaventy (BTP) ary nahazoany ihany koa ny mari-pahaizana ambony fandalinana momba ny Siansan’ny akora (Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences des matériaux). Maro ny fianarana hafa nataony ankoatr’ireo fa ireo no tena nisongadina.
Namoaka ny bokiny voalohany: SOMBIN’I AINA 1 ny fiandohan’ny Febroary 2015 : Boky 106 pejy misy tononkalo 54 sy sombin-tantara voarafitra ho tononkalo misy fizarana dimy (SATRIKO). Io boky io dia efa amidy eny amin’ny mpivaroboky eto Antananarivo.
Nampiditra : AinaNirinaPoeta
Mpamangy : 4193
TSY TIANY HONO AHO
FENO ANAO NY NOFIKO